Visual သင်ယူ - Marine Diesel Basic
Visual သင်ယူ - စာဖတ်ခြင်းအပေါ်ကိုမြင်လျှင်၏တန်ခိုး
ငါတို့ရှိသမျှသည်ကနာမည်များထက်မျက်နှာများမှတ်မိဖို့လွယ်ကူကိုသိ - နှစ်ပေါင်းများစွာပြီးနောက်ဟောင်းတစ်ဦးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အသိအမှတ်ပြုပေမယ့်သူသို့မဟုတ်သူမ၏အမည်အားမှတ်မိဖို့နိုင်ခြင်း။ လယ်ကွက်ရှင်းပြတစ်စုံတစ်ဦးကိုလုံးဝအလွတ်ကျွန်တော်တို့ကိုအရွက်နေချိန်မှာငါတို့သည်မကြာခဏသာစက္ကန့်အနည်းငယ်အကြာတွင်ရုပ်ရှင်ခွဲခြားသတ်မှတ်။
အမြင်အာရုံကိုတက်နှုတ်ထက်ပိုမြန်ကြိမ် 60,000 မှ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးနှောက်သို့ကြွလာလျက်အချက်အလက်များ၏ 90% (Hyerle, 2000) အမြင်အာရုံဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဟာပိုမြန်နှုတ်သတင်းအချက်အလက် (60,000M ကော်ပိုရေးရှင်း) ထက်3ကြိမ်မှဒေတာများတက်ကို process နိုင်ပါတယ်။ အမြင်အာရုံနှင့်အနှုတ်သတင်းအချက်အလက်အမှန်တကယ်မကြာသေးမီအာရုံကြောသုတေသနအရသိရသည်ကဦးနှောက်၏ကွဲပြားခြားနားသောအစိတ်အပိုင်းများကိုသက်ဝင်။ Visual သတင်းအချက်အလက်ဒါအသစ်ကအမြင်အာရုံသတင်းအချက်အလက် "ချောင်းကို" ဖို့ပိုဖွယ်ရှိသည်ပြီးသားဦးနှောက်၏ကွဲပြားခြားနားသောဒေသများရှိမှတ်မိပိုပြီးအများအပြားအသင်းအဖွဲ့များပါဝင်နေသည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးနှောက်ဒါကောင်းစွာတိကျမ်းစာ၌လာသည်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်, အမြင်အာရုံသတင်းအချက်အလက်မှအဆင်ပြေအောင်နေကြအဘယ်ကြောင့်, နားလည်ရန်ခက်ခဲသည်မဟုတ်။ တိရစ္ဆာန်ကိုသိရှိနိုင်ဖို့စာအုပ်ဖတ်တဲ့သူတစ်ဦးကမုဆိုးအသားစားခြင်းထက်လုယူရာမဖြစ်ရဖို့ပိုဖွယ်ရှိပါ!
သို့သျောလညျးအလုပျ၏အခြေအနေတွင် - ဘယ်အလုပ်ကိုမျှ (ရတဲ့အမှုတို့ကိုပြု) - အမြင်အာရုံတစ်ဦးတည်းမလုံလောကျပါပဲ။ မည်သည့်စကားများမရှိဘဲ PowerPoint တင်ဆက်ဆိုပါစို့။ ပရိသတ်ကိုမှာအကောင်းဆုံး, တျရှုပျထှေးနှင့်ဖွယ်ရှိရေးသားသူဆက်သွယ်ဖို့ကြိုးစားနေခဲ့ရာနားလညျမှုလှဲမှားမည်ဖြစ်သည်။
3 နာရီအကြာတွင်3ရက်အကြာမှာ
စကားပြော 25% 10 - 20%
စာဖြင့်ရေးသား 72% 10%
မြင်သာသော 80% 65%
လက်တွေ့ကျတဲ့ 90% 70%
"စကားများအမြင်အာရုံဘာသာစကားဖို့မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ သူတို့ဆက်သွယ်ရေးယူနစ်မှအယူအဆရေးရာပုံသဏ္ဍာန်ပေးနှင့်, အမည်သတ်မှတ်နှင့် element တွေကိုခွဲခြားနှင့် abstraction ဆွေးနွေးရန်ဖို့စွမ်းရည်ထောက်ပံ့"
ရောဘတ်။ အီးချို, စတန်းဖို့ဒ်တက္ကသိုလ်တွင်ဧည့်ပညာရှင် *
အဆိုပါ Next ကို 10-15 နှစ် (နှင့်အပြင်) တွင် * Visual ဘာသာစကားများနှင့် convergence Technologies က, 2001 ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့စကားများ, အယူအဆများ, အတွေးအခေါ်များပုံရိပ်တစ်ခုပေါ်သို့ချိတ်ဆက်နေကြသည်မဟုတ်လျှင် " ... သူတို့က, တနားအပါး၌သွားပါကဦးနှောက်ကတဆင့်ပင်လယ်ကူးနှငျ့အခွားသောစကားကိုနားထောငျထှကျသှားပါလိမ့်မယ်။ စကားများသာအကြောင်းကိုခုနစျပါးအချက်အလက်များ၏-bits (ပေါင်းသို့မဟုတ်အနုတ် 2) .... Images ကိုထိန်းသိမ်းထားနိုင်မည့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရေတိုရေရှည်မှတ်ဉာဏ်အားဖြင့်လုပ်ငန်းများ၌နေကြတယ်သူတို့ဖျောက်ဖျက်မရနိုင်အောင်စွဲရှိရာ, အခြားတစ်ဖက်တွင်, ရေရှည်မှတ်ဉာဏ်သို့တိုက်ရိုက်သွားပါ။ "
ဒေါက်တာ Lyell Burmack, ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, bettereducate.org
ပုံရိပ်တွေ၏တန်ခိုး ပေါင်းစပ် စာသား
အဆိုပါအယူအဆကြောင့်ပုံရိပ်တွေကို ပေါင်းစပ် စာသားမနှင့်အတူအများကြီးပိုမိုအသုံးဝင်နှင့်အစွမ်းထက်ပုံရိပ်တွေသို့မဟုတ်တစ်ဦးတည်းကစာသားတစ်ခုခုကိုထက်ဖြစ်ကြ၏အဏ္ဏဝါဒီဇယ်အခြေခံစီးရီး၏လမ်းညွှန်မူအရဖြစ်ပါတယ်။
ငါ့ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံကနေငါတစ်ချိန်ကငါဖြစ်ကောင်းအနည်းငယ်စာသားအကူအညီဖြင့်အမှုအရာမှထွက်တွက်ဆနိုင်ပါတယ်တစ်ခုခုမြင်ရပါတယ်ကြောင်းကိုငါသိ၏။ ငါပစ္စည်းကိရိယာများတစ်ဖဲ့ကိုရခြင်းနှင့်အတူအကျွမ်းတဝင်မရင့်လျှင်, စာဖြင့်ရေးသားသတင်းအချက်အလက်မျှသောပမာဏကိုလုံလောက်စွာလုပ်ငန်းစဉ်သို့မဟုတ်ဘယ်သို့ပြုခံရဖို့လိုအပ်ကြောင်းရှင်းပြနိုင်ပါတယ်။
"တစ်ခုက ဆေးထိုးစုပ်စက် ယင်းဖိအားအောက်တွင်လောင်စာဖြန့်ဖြူးမယ့်ကိရိယာ injector တစ်ဦး၏ လောင်စာထိုး စနစ်။ ... အဆိုပါအခြေခံ ဒီဇယ်ဆေးထိုး စနစ်၏ပါဝင်ပါသည် ဆေးထိုးစုပ်စက်, ဆေးထိုး လိုင်းများ, injectorsနှင့်ပလပ်တောက်။ "